လက်က်ျာစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားဝါဒ အင်အားကောင်းလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Buddhism’s right-wing face in Myanmar
စကားဝိုင်းမှ သူ့အမြင်များ »
လက်က်ျာစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားဝါဒ အင်အားကောင်းလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ
လက်က်ျာစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားဝါဒ အင်အားကောင်းလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ (ဘာသာပြန်)
M-Media မတ် ၃၁ ၊၂၀၁၅
မြန်မာနိုင်ငံထောင်တစ်ခုထဲမှာ ၈ နှစ်နဲ့ ၃ လ နေခဲ့ခြင်းက ဦးဝီရသူကို နှူးညံ့သိမ်မွေ့အောင် မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် အခုဆို သူဟာ ပြည်တွင်း ဗုဒ္ဓအမျိုးသားရေးဝါဒရဲ့ လက်ျာစွန်းရောက် ပြယုဂ်တစ်ခုပင် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
သူ့ရဲ့ အားပါးတရအပြုံးက ဆွဲဆောင်မှုရှိသော်ငြား အဆိုးတရားတွေ ပြောဆိုချိန်မှာတော့ သူ့ဟောပြောချက်တွေက ပြင်းထန် လာပြီး သူ့မျက်လုံးတွေက အရောင်တောက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ ဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်ရေးဖြစ်ကြောင်း ဆိုတာမျိုး ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့။.
ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ သူ့ဒဿနနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့သမျှအရာအားလုံးအပေါ် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ကြီးကို ပြောဆိုတတ်ပါသေးတယ်။
သာသနာ့ဘောင်ထဲ အသက် ၁၃ နှစ်မှာ ၀င်ရောက်ပြီး ယခု အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ်ရှိနေတဲ့ သူဟာ ၉၆၉ လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ လက်ျာစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓ၀ါဒလှုပ်ရှားမှုထဲ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။
၂ နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားအောင် တို့မီးရှို့မီးတရားဟောခဲ့တဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် ချမှတ်ခြင်း ခံလိုက်ရတယ်။
သို့ပေမယ့်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများအပြားနဲ့ရောပြီး လွတ်မြောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ အင်တာနက်နဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးလို့ သူ့ခံယူချက်ကို အသံထုတ်ဆူညံစေခဲ့ပါတော့တယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့တော် မန္တလေးက သူ့ကျောင်းတိုက်မှာ သူ့လက်အောက်ခံ သံဃာတွေ အပါး ၂၀၀၀ ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်က သူ့ဒကာတော်တစ်ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့စွန်က မထင်မရှားအိမ်တစ်လုံးမှာ The Straits Times နဲ့ တွေ့ဆုံပါတယ်။
အကြီးစားသစ်သားထည်ပရိဘောကတွေနဲ့စီတန်းထားပြီး ဧရာမရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးပါရှိတဲ့ သာမန်ဧည့်ခန်းဆောင်တစ်ခုထဲမှာ လူတစ်စုနဲ့အတူ စားပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာထိုင်လို့ပေါ့။ သူက လှစ်ကနဲ ပြုံးပြီး “အရှိအတိုင်း ရေးသားတင်ပြမယ် ဆိုရင် မေးလိုရာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်” လို့ ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။
“အသင်ဟာ တော်တော့ကို ကျော်စောလှပေတယ်” လို့ ကျနော်က သူ့ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်က တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှာ သူ့မျက်နှာပုံနဲ့ “The Face of Buddhist Terror” လို့ ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တော့ သူ့နောက်တော်ပါးတွေက ဒေါသပေါက်ကွဲပြီး မဂ္ဂဇင်းကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။
အဲ့ဒီအချက်ကို ပြန်လည်နှိုးဆွလိုက် သလိုဖြစ်သွားတော့ သူက သူ့ရဲ့ Samsung Galaxy SII ဖုန်းလေးကို ပွတ်ရင်း အသံသွင်း ခလုတ်ကိုနှိပ်လို့ ရယ်မောခဲ့တယ်။
အခြားတစ်ဖက်မှာ သုံးချောင်းထောက်တိုင်ပေါ်က ကင်မရာမီးနီလေး လင်းလာတာ တွေ့ရတယ်။ အင်တာဗျူးကို မှတ်တမ်းတင် ရိုက်နေတာပါပဲ။
ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်က မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်လို့ ကျနော်တို့ကို ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်နေလေရဲ့။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယမြောက် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းက ငါးမိနစ်တစ်ကြိမ် အသံမြည်နေပေမယ့်လည်း သူက လျစ်လျူရှုထားတယ်။
စကားပြန်ကနေတဆင့် သူက ဒီလို ဆိုပါတယ်။
“ဒီကျော်စောမှုအပေါ် ဦးဇင်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ပြဿနာက သူတို့ဟာ ဦးဇင်းကို နိုင်ငံတကာက အဆိုးမြင်အောင် အကြမ်းဖက်သမားလိုမျိုး လူမျိုးမုန်း ၀ါဒီလိုမျိုး ပုံဖော်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဦးဇင်းက လူမျိုးခြားကို မုန်းတီးတတ်တဲ့ လူဆိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်ခြင်းက ဦးဇင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ”။
ဦးဝီရသူဟာ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်စွန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ပြန်ရောက်လာကာစ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု နိမ့်ကျလွန်းလှတဲ့ အဲ့ဒီဒေသမှာ မွတ်စလင်-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒေသခံလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေ စုပြုံသတ်ဖြတ်ခံရတယ်၊ သောင်းနဲ့ချီ ပြီး နေရပ်စွန့်အိုးအိမ်မဲ့ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရတယ်။
သူက နိုင်ငံအနှံ့ ခရီးဆန့်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေခံစားနေရတဲ့ အစ္စလာမ့်အန္တရာယ်အကြောင်း တပ်လှန့်တရားတွေ (သူ့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်တွေ)ကို ဟောပြောနေလေ့ရှိတယ်။
၂၀၁၂ နဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နေရာ များစွာမှာပွင့်ထွက်လာခဲ့တဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် အောက်ခံ ပုံကြမ်းလောင်းသူဟာ သူပင်ဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်သူများ၊ သုတေသီများက ဆိုပါတယ်။ သြဇာကြီးမား ထင်ရှားကျော်စောတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးအချို့ကလည်း သူ့ကို လက်မခံကြပါဘူး။
မွတ်စလင်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ အများစုဖြစ်သော်လည်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူများစုမြန်မာနိုင်ငံ အတိုင်းအတာအရ ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိသာရှိမယ်လို့ ခန်းမှန်းရပါတယ်။
အဲ့ဒီဒေသမှာ မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းဖက်မှု ကြိုကြားကြိုကြား ရှိလာပေမယ့် သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတာပါ။
သို့ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သွေးအေးနေဦးမယ်ဆိုရင် အစ္စလာမ်ဘာသာက မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်စစလွှမ်းမိုးသွားမယ်လို့ ဦးဝီရသူက အခိုင်အမာဆိုနေဆဲ ဖြစ်တယ်။ ဘာသာကွဲထိမ်းမြားမှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ အငြင်းပွားဖွယ်ဥပဒေမူကြမ်းကိုလည်း သူက ကျားကန်ပေးထားပါတယ်။
ဦးဝီရသူက လက်လွှတ်စပယ်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော့်ကို တည့်တည့်ကြည့်လို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေသံနဲ့ ပြောပါတယ်။ မီဒီယာဟာ မျက်စေ့တစ်ဖက်ကိုသာသုံးပြီး ကြည့်မြင်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။
“ မြန်မာနို.င်ငံမှာ မွတ်စလင်တွေ ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပဲလို့ ခင်ဗျားက ပြောတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ကြိုက်တဲ့ရဲဋ္ဌာနကို သွားကြည့်ပါ။ မုဒိမ်းသမား အများစုက မွတ်စလင်တွေချည့်ပဲ။ မွတ်စလင်နဲ့လက်ထပ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးဟာ ဗုဒ္ဓပုံတော်ကို မဖွယ်မရာလုပ်ခိုင်းတာ ခံရတယ်။ ဦးဇင်းက ဒါကိုသိတော့ အမှန်အတိုင်း ပြောဆိုတယ်။ ဒါကို ဦးဇင်းက အကြမ်းဖက်မှုကိုဖန်တီးနေတယ်လို့ တချို့သူတွေက နားလည်မှုလွဲမှားကြတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဦးဇင်းက မှန်ရာကိုပဲ ပြောဆိုနေတာပါ။ အဲ့ဒီဒုစရိုက်သားတွေကိုသာ ဦးဇင်းက ဒဏ်ခတ်ချင်တာပါ။ တခြားမွတ်စလင်တွေကို မဟုတ်ပါဘူး”။
ဒီဗီဒီပြစက်ကိုထုတ်ပြီး ဓာတ်ပြားတစ်ချပ်ကိုထည့်လိုက်တယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောက ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်အုပ်စုတစ်စု ခဲတွေနဲ့ပစ်ပုံ၊ အိမ်တွေ မီးတင်ရှို့နေပုံကို ဖုန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။
“တခြားလူနည်းစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူနဲ့ခရိယာန်တွေက ပြဿနာမရှာကြဘူး။ မွတ်စလင်တွေကပဲ တခြားဘာသာတွေအပေါ် ဘယ်လိုစော်ကားရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေကြတာလေ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
သူ မီးမွှေးပါတယ်ဆိုတဲ့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးဆူပူမှုတွေကိုကြည့်ရင် ပုံစံတူဖြစ်စဉ်တွေကိုသာ အမြဲတမ်း တွေ့နေရပါတယ်။ သာမန်အငြင်းပွားမှုဖြစ်စေ၊ မုဒိန်းမှုဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ဖြစ်စေ အဲ့ဒီကနေ စတင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးဖက် ဦးတည်လိုက်ကြတယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ တလွဲတချော်ဆိုတာ ပေါ်လာတာချည်းပါပဲ။
သတင်းတွေက လူမှုမီဒီယာတွေမှာ တောမီးလောင်သလို တမဟုတ်ချင်း ပျံ့နှံ့သွားတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ကြိုတင်စုစည်းထားဖွယ်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူအုပ်ကြီးက မွတ်စလင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် မိုးကျရွှေကိုယ်လို ကျရောက်လာတယ်။ သူတို့ရပ်ဝန်းကို မီးလောင်တိုက်သွင်းတယ်။ မွတ်စလင်မိသားစုတွေကို ကလေးပင်မချန် ခုတ်ထစ်သတ်ဖြတ်ကြတယ်။
ဒီအမှုမျိုးဟာ ပြည်ပ အစွန်းရောက်အစ္စလာမစ် အုပ်စုတွေရဲ့ဒေါသကို နှိုးဆွလိုက်တဲ့ အပြင်၊ အရှိန်တက်လာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုက သုတေသီတွေအကြား စိုးရိမ်စိတ်မြင့်မားသွားစေခဲ့ပါတယ်။
လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အတိတ်ခေတ်အမာခံများက နောက်ကွယ်ကနေ ဦးဝီရသူကို ကျားကန်ပေးနေတယ်၊ အမျိုးသားရေးဝါဒကို လက်နက်အသွင် အသုံးချတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်များလည်း ရှိနေကြပါတယ်။
သူက မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်မှန်သမျှကို ပယ်ချတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်မှုကို တည်ထောင်လိုက်ပြန်တယ်။ ယမန်နှစ်နှောင်းပိုင်းက သူဟာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက လက်ျာစွန်းရောက်အုပ်စု Bodu Bala Sena ကမကထပြုတဲ့ညီလာခံကို သွားရောက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ဇန္န၀ါရီလမှာ ရှေ့ဆောင်သံဃာတစ်ဦးပီပီ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ဆင့် တိုးလာခဲ့တယ်။
မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ယန်ဟီးလီက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူနည်းစုရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပြီးနောက် သူမကို ဦးဝီရသူက“ပြည့်တန်ဆာမ” လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားအပေါ် ကုလသမဂ္ဂရဲ့အရေးဆိုမှု ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထွက်ပေါ်လာတော့တယ်။
ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရခိုင်တွေ၊ အစိုးရကိုယ်တိုင်အပါအ၀င် မြန်မာလူထု အများအပြားဟာ ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက တရားမ၀င်ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူ ဘင်္ဂါလီတွေအဖြစ် စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုပင်လျှင် ဗုဒ္ဓအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေအဖို့ နားမထောင်ချင်စရာအဖြစ် နိုင်ငံရေးအရ အလံထောင်ထားကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်းသံဃာတစ်ပါးအတွက်ဖြစ်စေ ဘယ်လိုလူအတွက်ပင်ဖြစ်စေ မစ္စ ယန်ဟီးလီကို “ပြည့်တန်ဆာမ”လို့ ခေါ်ဝေါ်လိုက်ခြင်းက မယဉ်ကျေးနိုင်စရာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးလားလို့ ကျွန်တော်က မေးမြန်းတဲ့အခါ သူ(ဦးဝီရသူ)က ဒီလို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“သူမဟာ ဘင်္ဂလီတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ပါ။ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေအပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် သူမ ကြိုးစားနေတာ။ ဒါမှ ဘင်္ဂလီတွေအားလုံး နိုင်ငံသားဖြစ်သွားမယ်လေ။ သူမက ကုလသံတမန် တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ မွတ်စလင်တွေအတွက် ဘင်္ဂလီတွေအတွက် လော်ဘီလုပ်ပေးနေစရာ မလိုအပ်ဘူး။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်ဖြင့် သူ့ကို ဖိနပ်နဲ့ ပစ်ပေါက်ရပါလိမ့်မယ်”။
The Straits Times : Asia Report မှ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် Indochina Bureau Chief ဖြစ်သူ Nirmal Ghosh ရေးသားသော Buddhism’s right-wing face in Myanmar ဆောင်းပါးကို မြင့်မိုရ်မောင်မောင်မှ ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုသည်။ Nirmal Ghosh အား nirmal@sph.com.sg လိပ်စာဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံအညွှန်း-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သွေးအေးနေဦးမယ်ဆိုရင် အစ္စလာမ်ဘာသာက မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်စစလွှမ်းမိုးသွားမယ်လို့ ဦးဝီရသူက အခိုင်အမာဆိုနေဆဲ (ဓာတ်ပုံ – NIRMAL GHOSH)
This entry was posted on March 31, 2015 at 1:48 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “လက်က်ျာစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားဝါဒ အင်အားကောင်းလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ”
As 969 Ma Ba Tha is supporting the Thar Kee Thwe…No point going to them as 969 Ma Ba Tha is the CRIMINAL ORGANIZATION which is writing and preaching the lies of HATE SPEECHES against Musllims.
Their head Wirathu was caught red-handed to trying to createaMASSACRE on Mandalay Muslims. So if 969 Ma Ba Tha wish to judge this case, expel Wirathu and advise Government to arrest and try for that CRIME.
But I just write as an undeniable fact only. They won’t do anything but would continue to churn out ISLAMOPHOBIC HATE SPEECHES as they are AGENT PROVOCATEUR Military-lapdogs of Bama Buddhist Military Government. I hope and pray that UN, US, EU and ICC would one day announce that 969 Ma Ba Tha is the TERRORIST organization.